🥇 ▷ Vivo NEX 2 wuxuu la imaan lahaa Snapdragon 845 iyo 10GB oo RAM ah ✅
Vivo NEX 2 wuxuu la imaan lahaa Snapdragon 845 iyo 10GB oo RAM ah
In muddo ah hadda sumadda Vivo Waxay soo jiidanaysaa indhaha inta badan suuqa. Kordhintiisu waxay ka timid soo bandhigida mobiilkaas oo wata kamarad hore oo miiraaysa Laakiin waxay umuuqataa cusboonaysiinta, NEX 2, gacmaha ayuu ku karsanayaa.
Si kale haddii loo dhigo, gudaha Geekbench wuxuu gudbay aalad loo aqoonsaday Vivo V1821A. Wararka xanta ah ma aysan qaadin inay soo bandhigayaan inuu yahay mid horey loo soo sheegay. Tanna waxaa lagu sii xoojiyay iyadoo la sheegayo in nambarka nambarku uu la mid yahay filtar hore oo la sameeyay ilaa shahaadada 3C.
Vivo NEX 2… moobiil kale oo laba shaasha ah
Sawirka kor ku xusan khadkaan wuxuu u dhigmaa qabsashada ciidankeena. Waxaa halkaas lagu arki karaa taas Vivo NEX 2 ayaa kor u qaadi doona processor processor ‘Qualcomm Snapdragon 845’ ah. Taasi waa, SoC-da ugu weyn ee aaladaha Android ee sanadkaan 2018, tan iyo sanadka soo socda waxaan horeyba u leenahay Snapdragon 855.
Waxay qaadi doontaa 10GB oo RAM ah iyo Android 9 Factory Pie. Si kale haddii loo dhigo, waxaan yeelan doonnaa awood iyo software la cusbooneysiiyay.
Iyo si sax ah xagga awooda, natiijooyinka tijaabin way indha sarreeyaan 2,220 dhibcood qaybta Hal-xudun iyo 8,467 ee Midabbo kala duwan.
Intaa waxaa sii dheer, haddii aan u qaadanno tixraac wararkii hore, this Vivo NEX 2 wuxuu lahaan lahaa shaashad weyn oo 6.5 inji ah. Oo maxaan u leeyahay “shaashadda weyn”? Wanaagsan maxaa yeelay Isla taas ayaa noqon doonta safka hore. Taasi waa, waxaa jiri doonta mid kale bandhig Dhab ahaan 5.5-inji sare ah dhabarkiisa.
Aagga dambe sidoo kale waxaa jiri doona farqad dayaxa oo iftiinaysa RBG si loogu wargaliyo. Dheeraad ah, waxaan yeelan doonnaa kamarad saddex-geesood ah oo weyn, oo ay ku jiraan 3D ah isweydaarsiga qoto dheer ee TOF (Waqtiga Duulista, ama Waqtiga Duulista).
Si kastaba ha noqotee, kamarada hore ee hoos udhigta, taasi waa, muuqaalka ugu weyn ee ‘Vivo First-generation NEX’ wuxuu ku baaba’ayaa dhaxalkiisa. Fikradda ayaa ah in la isticmaalo shaashadda sare si loo muujiyo ugana faa iideysto kaameerada seddexda ah ee weyn si loo qabto kuwa ka wanaagsan iskii. Ciyaar la mid ah tii Nubia X.
Dhanka kaydinta gudaha, waxay u badan tahay inaan haysanno 128 ama 256GB ee ROM; ama labada xulasho.
Ugu dambeyntiina, waxay ku sii jirtaa in la yiraahdo taa Vivo waxay xaqiijisay dhacdo ay bilaabatay 12-ka Diseembar ee sanadkan. Maalmo gudahood waxaan ogaan doonnaa dhammaan sirta moobiilkan.
Xigasho: Nashville Chatter